Black umkhawulo ( "Skyrim") kukodwa emhumeni omkhulu, elimiswe Dwemer umuzi omkhulu e "Skyrim" ngokuthi Thulile City. Phakathi neMpi we Falmer Rocks bazama ukuyibamba edolobheni, kodwa ekugcineni wathola ukuthi uhlanga Dwemer baphela emehlweni ebusweni Tamriel.
Septimus Dragonborn Segond uthi emnyango yasekuqaleni emhumeni is Nokho, ise Alftand edolobheni, ne Imigudu eziningana kwamanye amadolobha Dwarven ukuthi nabo babeba ngokuhamba kwesikhathi.
Kuyini kule ndawo?
Black umkhawulo ( "Skyrim") ingenye izindawo ezinkulu e-game. Ukufinyelela le ndawo kuzovula ngemuva kokuthi kusebenze isigaba ezifanele, ngoba ukuvula emnyango, kumele ube ububanzi okukhethekile ukulungiswa. Abaningi kulokhu abazi kuphi ukuthola "Skyrim" Black mkhawulo. Indlela yokungena emzini? Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa amanxiwa ahlukahlukene Dwemer usebenzisa sphere ukulungiswa kudivayisi abafanele.
Uma ungazi lapho "Skyrim" Black umkhawulo, umnyango itholakala ku:
Kuyaphawuleka ukuthi kukhona okukhiphayo ezingaphezu kuka izidingo. Umdlali unikezwa ngamakheshi eziningana, ngalo sizokwazi kakhulu ukunciphisa komgwaqo.
Iqhubeka kule ndawo, uma kuba sobala ukuthi umkhawulo Black ( "Skyrim") akuyona efana kunoma iyiphi enye indawo kule game, ngesikhathi ngempela ezinabantu abaningi izidalwa ahlukahlukene, iningi zazo - iyona Falmer. Ukwahlulela nezidalwa lokuhlushwa ukule ndawo, singasho ukuthi lapha kukhona ezinye usesimweni inhloko-dolobha yabo, kuyafaneleka yokuthi lapha kuphela abambona ngokoqobo izinceku falmerskih abanale ukubukeka evamile futhi ngesikhathi esifanayo ngenkuthalo ukuvikela amakhosi azo. Futhi, yebo, eduze Falmer ngokuvamile ukwethula abangane bawo njalo - izicabucabu Frosty futhi korusy scary ngaphezulu.
Ngaphezu kwalokho, kukhona inani elikhulu nezinye izidalwa, okuyinto cishe kanye lapha ngisuka ngaphandle. Ikakhulukazi, lokhu kusho unina giant futhi intuthu. Ngenxa yefa we Dwemer yekhulu lungatholwa, kodwa ngeke kube kuhle kuwe, yebo, yena ziyohlasela ngokushesha nje lapho ukuyibona. Yiqiniso, ngaphezu eCenturion Ungase futhi uthole ezinye eziningi izindlela ukuzivikela, okuyinto balimelela zensimu.
Kuphi ukuthola sigaba?
Ukufuna ukuvakashela le ndawo ngokuthi "Ngalé abavamile" futhi liyireferensi Daedra Prince Hermaeus Moru. Ekuqaleni, ukufuna esithathwayo, njengoba kushiwo ngenhla, Septimius Segond, kodwa ke kuba sobala ukuthi inceku kuphela Prince. Zuku isidingo ukuqoqa igazi zonke izinhlanga, bese ubuyela emuva kuze kube ngolwesikhombisa. Uyowaletha kuye ngokwakhe, kanjalo evula isicupho dwarven. Ngaphakathi isicupho Liyincwadi Hermaeus Moru uthanda ukukunika ukuthi kuzokuvumela wengeze +5 ukuze amakhono athile.
izakhi Eyingqayizivele Black umkhawulo
Esikhathini Black umkhawulo lungatholwa Sinderiona laboratory, ebesilokhu sikhishwa Alchemist ziyaphawuleka, futhi ireferensi ingxenye eyandulele uchungechunge - TES IV Ekuqothulweni.
Futhi uzinake Kuyaphawuleka ukuthi itholakala ebomvu izimpande Nirn, kwadingeka kwezinhlelo umsebenzi Emuva izimpande. Ayikho enye indawo ayikwazi ukuthola lezi izimpande.
Isimanga ngokuba Dragonborn
Bambalwa abantu bazi ukuthi Black umkhawulo ( "Skyrim") ikuvumela ukuba ushayele dragon okuthiwa Vulturyol okungukuthi uhlobo ukumangala kubadlali okuvela konjiniyela. Ukuyibiza, kufanele usebenzise ngowokuqala ngqa lofundziwe ukhala ibutho elinamandla ku Dwemer ilanga ukuthi kuthé ngenhla endaweni eyinhloko Pacific City. Yeqa kunzima ngempela, kodwa hhayi wonke umuntu angakwazi ukuqagela ukuthi isimanga ethakazelisa kangaka.
World of Tanks: T Umhlahlandlela 54
"Crisis 3": umdlalo edlulayo. Umhlahlandlela kunazo olunzulu kuya ukuhamba Crysis 3
IZambezi (umfula e-Afrika) oluvela nalapho ngulona logeleta? IZambezi: umthombo, ubude, ibalazwe nesithombe indawo
Russian ruble esiliva: ukuzalwa futhi ukuqedwa
Outsourcing inkampani - lokho oyikho nalokho amasevisi anikezwa?